Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » World LGBTQ+ Day Tourism Style Italian
omenala • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akwụkwọ akụkọ Italy • LGBTQ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
World LGBTQ+ Day Tourism Day
Ọgọstụ 10 na -esote ga -abụ ụbọchị njem LGBTQ+ ụwa, nke e guzobere na mba ndị Latin America ma nakweere na ọkwa mba ụwa.
Ịtali na -abịa nhọpụta a na World LGBTQ+ Tourism Day na nke mbụ ya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ịbịanye aka ọnụ n'okpuru Protocol & Inclusion Protocol bụ ENIT National Tourism Agency, AITGL Italian Gay & Lesbian Tourism Association, na Sonders & Beach Group.
Usoro ọhụrụ ahụ na -ahụ Italytali, dị ka nnukwu mba ụwa, na -agbaso amụma njikwa di iche iche iji kwado maka nhọpụta dị mkpa nke 2022.
A malitere usoro a n'ihi nhọpụta nke "IGLTA 2022 Mgbakọ na Milan" Italy. Onye isi IGLTA Alessio Virgili kwuru, "IGLTA Mgbakọ 2022 na Milano ga -enwu dị ka ọkụ na Italy. "
Njem nlegharị anya LGBTQ+ na Italy na -aga n'oge ọhụrụ. Ụlọ ọrụ ENIT zuru ụwa ọnụ na -enye aka na nyocha mpaghara site na nkwado nke Kọmitii Sayensị AITGL, nke ndị isi na -eme njem nlegharị anya na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Italiantali na -esonye.
Onye isi ala Virgili kwuru, sị: “Njem nlegharị anya LGTBQ+ na -ewepụta ijeri euro 2.7 na ntụgharị na Itali. Obi dị m ụtọ na m rutela ọkwa a mgbe anyị nwesịrị nkwa ogologo oge maka uto nke ahịa a site na nkwado nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na azụmaahịa. "
"IGLTA Virgili kwukwara, "Mgbakọ ahụ na -enwe ọmarịcha oge, mmetụta akụ na ụba nke mmetụta a nwere ike imepụta ga -anọchite anya mmụba ọzọ maka obodo anyị, na -emepụta nde dollar abụọ na naanị ọrụ enyemaka maka Milan na -akwado ihe omume a."
Njem nlegharị anya LGBTQ+ bụ ngalaba na-akwụsi ike nke ukwuu nke na-azụlite mmasị dị iche iche nke na-akwalite ngalaba njem. Ịtali na -edekọ pasent iri nke ngụkọta ndị njem LGBTQ+ ụwa niile na -enye ohere maka ụlọ ọrụ na -achọ ịbawanye na itinye ego na mpaghara a dị mkpa nke na -eme ka Italytali bụrụ obodo nnabata.
A na -eme nchekwa, nke na -adịkarị mkpa maka ndị njem LGBTQ + n'ụwa niile n'afọ a nke isiokwu ya bụ "Ahụmịhe dị nchebe maka ndị njem LGBTQ, maka njem gaa njem nlegharị anya gụnyere."
Virgili kwubiri, "ọkwa ihe ịga nke ọma ugbu a, nke rụpụtara ọtụtụ afọ, bụkwa mmeri na uru azụmahịa maka ndị ọrụ Italiantali niile na mpaghara ahụ."
World LGBTQ+ Day Tourism Day a na -eme emume n'ọnwa Ọgọst 10 nke afọ ọ bụla ma na -agụnye emume, nkwupụta na mmemme. Ụbọchị ahụ na -asọpụrụ ndị ọsụ ụzọ na njem ndị mepere ụzọ ma mee njem dị nchebe maka nwoke nwere mmasị nwoke, nwanyị nwere mmasị nwanyị, bisexual, na trans njem nleta ma na -amata ndị butere ụzọ n'ịkwanyere icheiche dị n'ime azụmahịa ha.
Podcast Nnukwu nwoke nwere mmasị nwoke si Puglia ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 11, 2021 na 02:25
Lee ozi ọma! Dabere na nyocha emere na mpaghara LGBTQ+ Italy, Puglia bụ ebe LGBTQ kacha amasị Italy. A makwaara Puglia na mba ụwa dịka otu n'ime ebe ndị mmekọ nwoke na nwoke ise kacha mma na Europe maka ndị njem LGBTQ+. Nke na -eme Puglia ebe zuru oke ịnọ na 5 Ọgọst 10.